Nepal Deep | निधि बाहेकका निकटस्थ नेतालाई देउवाको आग्रह: फेरी सभापति हुने रहर छ, सहयोग गर्नुस् !
निधि बाहेकका निकटस्थ नेतालाई देउवाको आग्रह: फेरी सभापति हुने रहर छ, सहयोग गर्नुस् !
काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकटस्थ नेताहरुलाई बोलाएर सभापतिमा अझै एकपटक उठ्ने रहर भएको बताएका छन्। आफ्ना निकटस्थ नेताहरूलाई गोप्य रुपमा बोलाएर देउवाले महाधिवेशनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्।
बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मलाई फेरि एकपटक सभापतिमा उठ्ने रहर जागेको छ। पार्टीमा गर्नु पर्ने काम धेरै छ। एकपटकलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो।’
देउवा क्याम्पका महत्वपूर्ण नेताहरु सहभागी भएको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि उपस्थित थिए। देउवाले सभापतिमा दोहोरिने चाहना राखेपछि निधिले आफ्नो पनि सभापतिमा दाबी गरेको बताएका थिए। जवाफमा देउवाले आफ्नो इच्छा गर्न तर आफूबाट सहयोगको अपेक्षा नगर्न बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
केही समय देखि आफू नै सभापतिमा उठ्ने दाबी गर्दै आइरहेका निधिलाई देउवाले त्यस्तो जवाफ दिनुलाई अर्थपूर्ण हिसाबले लिइएको छ।
छलफलमा सहभागीले अघिल्लो पटकको टिममा रहेका सबैसँग मिलेर सहमतिमा अघि बढ्न देउवालाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा छलफलमा सहभागी अर्का नेताले भने,‘दाईको हाउभाउ हेर्दा यसपाली पनि सभापति लड्ने देखिन्छ। उहाँ बिमलेन्द्र दाईलाई बाइपास गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ।’
बैठकमा सहभागी हुन नेताहरुलाई बोलाउँदा नै हल्लाखल्ला नगरी गोप्य रुपमा आउन आग्रह गरिएको थियो।
उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री सुनिल थापा, केन्द्रीय सदस्यहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. डीला संग्रौला, मीन विश्वकर्मा लगायतका देउवा क्याम्पका महत्वपुर्ण नेता सहभागी भएको बताइएको छ।
बाघ दिवस : बाघ संरक्षणमा उत्साहजनक उपलब्धि, मानव-बाघ द्वन्द्व भने भयावह